Fikradaha astaanta sawir-qaadista: calaamadaha ugu fiican ee lagu dhiirigaliyo oo la naqshadeeyo | Hal-abuurka khadka tooska ah
fikradaha logo sawir
Nerea Morcillo | | Sawir, General
Sawir qaadashadu waxay had iyo jeer ahaa mid ka mid ah farsamooyinka lagu qiyaaso naqshadaynta garaafyada, laakiin haddii aan ku dhex darno sawir qaadista iyo aqoonsiga, ma garanayno si hubaal ah sida loo bilaabo midaynta qaybaha Halxiraalahan ballaaran.
Taasi waa sababta ay lagama maarmaan u tahay in la soo bandhigo fikrado taxane ah si ay u awoodaan in ay naqshadeeyaan calaamad muujinaysa oo gudbisa dhammaan dabeecaddeeda iyo shakhsiyaddeeda. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale ku tusin doonaa qaar ka mid ah noocyada shirkadaha u heellan qaybta maqalka ama muuqaalka, kuwaas oo aad hubaal ka ogaan doonto oo taariikhda u galay sida ay u gudbiyaan ujeedooyinkooda iyo matalaadooda.
1 Sawir qaade
1.1 Sawirka iyo naqshadeynta
2 Fikradaha lagu abuurayo astaanta
2.3 qiyamka iyo yoolalka
2.5 Nooca ganacsiga
2.7 Nooca sawirka
2.8 Saamaynta iyo gradients
2.9 Waraaqaha midabaynta
Kahor intaanan kugula talin dhinacyo ka mid ah aqoonsiga ama calaamadaynta, waxaa lagama maarmaan ah in la sharaxo waxa sawir-qaadiddu tahay si aad isula jaanqaadi karto qaybaha ku dhacay jidka. Hagaag, marka la soo koobo, sawir qaadashadu waa farsamo ama hawlo ka mid ah naqshadaynta garaafyada Taasina waxay mas'uul ka tahay qabashada iyo saadaalinta qaar ka mid ah daqiiqadaha aan nool nahay waxaanan u rogay qaab muuqaal ah.
Si sawirkaan loo sameeyo, waxaa loo baahan yahay iftiin, Taasi waa sababta saldhigga sawirku uu ku salaysan yahay iftiinka. Laakiin ma rabno in aan u sii dhex galno dhinacyo aad u farsamo, laakiin waxaan rabnaa inaad ogaato waxa aan wajihi doono, naqshadeynta aan sameyneyno.
Marka la soo koobo, haddii aan isku dhejino iftiinka iyo muraayadaha, sawirka waxa hareerahayaga ku jira ayaa la saadaaliyay, waxaana muhiim ah in la ogaado in iftiinka la'aanteed uusan jirin sawir-qaadis.
Sawirka iyo naqshadeynta
Xigasho: Arcadina Blog
Marka aan ka hadalno sawir qaadista oo ah mid ka mid ah laamaha naqshadeynta, waxaan xisaabineynaa in naqshadeeyuhu ay tahay inuu aqoon u leeyahay sawirka maadaama ay ku saleysan tahay inuu yahay shey uu ku shaqeyn doono marka naqshadeynta. Intaa waxaa dheer, uma baahnid oo kaliya aqoonta sawirka iyo nooca sawirka aad u baahan doonto mar walba ama sida aad u tafatirto si ay ugu habboonaato naqshaddaada.
Laakiin waxaad u baahan doontaa aragtida sawirka halka cilmi-nafsiga uu soo galo ciyaarta. Haddii aan tixgelinno in sawir-qaadiddu sidoo kale tahay farshaxan Waa in aan tixgelinno in naqshadeynta ay u baahan doonto sawirka iyo habkan cilmi-nafsiga iyo falanqaynta xigta si aan uga jawaabo su'aalaha aad hore u taqaanay, sida: waxa aan rabo in aan gudbiyo iyo sida aan rabo in aan u gudbiyo.
Taasi waa sababta ay muhiim u tahay inaad ogaato oo aad fahamto in muddo dheer ka hor naqshadeynta logo, ay muhiim tahay in la ogaado waxa ina horyaal iyo sababta aan u wajahayno. Marka la soo koobo, marka aan naqshadeyno calaamad shirkad gaar ah oo u heellan sawir qaadista, waxaan ka bilaabeynaa aasaaska fikradaha sida: kamarad, iftiin, ujeedo, qabasho, mashruuc, iwm.
Laakiin sidoo kale waa lagama maarmaan in la fahmo macnaha fikradahan, maadaama calaamadeena laga yaabo in lagu dhejiyo qaar badan oo iyaga ka mid ah iyada oo aan la tirinin in ay ku raran yihiin qaar badan oo iyaga ka mid ah. Waa kuwan fikrado aad ku bilaabi karto naqshadaynta.
Fikradaha lagu abuurayo astaanta
inta u dhaxaysa qodobada ugu waaweyn waxay yihiin:
Source: fikrad hal abuur leh
Kahor intaadan bilaabin naqshadaynta, waxaad u baahan tahay inaad ka fikirto nooca calaamadda aad samaynayso, maadaama ay jiraan kuwo badan oo aad u kala duwan. Qaar badan oo iyaga ka mid ah waxay ku bilaabaan magaca aasaasaha shirkadda, kiiskan waa mid ku habboon haddii calaamaddaadu noqon doonto mid shakhsi ah oo aad u shaqeyn doonto si madaxbannaan. Laakin waxaa jira kuwa kale oo u baahan magac-magacaabid dheeri ah oo aan la taaban karin maadaama summadaadu ay noqon karto shirkad gaar ah oo ka weyn. Dhab ahaantii, Kahor intaadan bilaabin tusaalaha, waxaad u baahan tahay inaad ka fikirto magacaabista.
Nasiib wanaag iyo nasiib darro, waxaa jira shirkado iibiya wax la mid ah kuwayada oo aan xumaan iyo wanaag midna ahayn, balse waa qayb ka mid ah suuqa iyo tartanka shirkadaha. Way fiican tahay in la tartamo, sidaas awgeed, waa lagama maarmaan in Kahor intaadan abuurin astaantaada, ogow kuwa ugu muhiimsan ee kula tartamaya. Ma aha oo kaliya inay tani kaa caawinayso inaad si fiican u dhigto astaantaada, laakiin waxay sidoo kale kaa caawineysaa inaad dhiirigeliso iyo inaad haysato tusaale aad ku dayan karto. Ha la joogin kan ugu horreeya ee aad hesho, samee baaritaan guud oo ballaaran kaas oo kaa caawin doona habka xulashada.
qiyamka iyo yoolalka
Qiimaha iyo ujeedooyinka calaamad waa taxane ah shuruudo ay tahay in ay joogaan aasaaska iyo horumarinta astaanta. Waa lagama maarmaan in aad tustid dhagaystayaashaada sida aad ula xidhiidhi lahayd iyaga iyo sawirka aad doonayso in aad dadka kale ka samayso. Waxaad dooran kartaa inaad isticmaasho qiyam dhab ah oo wax dhisaya in muddo ka dib aad maskaxda ku hayso inaad korto oo aad kordhiso qiimaha shirkaddaada. Ama taa caksigeeda, waxaad dooran kartaa heerar hoose oo aad rabto inaad si fiican ugu guulaysato yoolalkaaga meel yar.
Dhageystayaasha la beegsanayo iyoWaa waxa qeexaya cidda aad beegsan doonto, qaybta ama kooxda dadka astaantaada lagu beegsan doono. Si aad u ogaato una ogaato jawaabta su'aalahan, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso dhinacyo ay ka mid yihiin: da'da, jinsiga, heerka dhaqan-dhaqameed, heerka dhaqan-dhaqaale, dhadhanka iyo hiwaayadaha iwm. Waa qayb ka mid ah qodobbada istaraatiijiyadda suuq-geynta waxayna ka caawisaa in si wanaagsan loo meeleeyo astaanta suuqa. Markaad ogaato cidda macaamiishaadu noqon doonaan, waxaad heli doontaa wax walba.
Marka aan ka hadalno nooca ganacsiga, waxaan ka hadalnaa nooca shirkadda aad rabto inaad noqoto. Waxaa jira noocyo badan oo ganacsi, dukaamo online ah oo alaabtooda ku iibiya suuqyada elektaroonigga ah, bakhaarro jireed oo ku yaal magaalooyin kala duwan, dukaamada kaliya ee ku iibiya sawiradooda bogagga shabakadda, iwm. Kahor intaadan bilaabin naqshadaynta astaantaada, waxaad u baahan tahay inaad ka tarjumto nooca ganacsiga ama shirkadda aad u mashruuci doonto dhagaystayaashaada.
Haddii aadan aqoon noocyada ganacsiga ee jira, waxaan kuu soo jeedineynaa inaad diiwaan geliso oo aad naftaada ogeysiiso maxaa yeelay waxay kaa caawin kartaa inaad hesho waxa ugu habboon soo jeedintaada hore.
inta u dhaxaysa dhibcood labaad waxay yihiin:
Astaantu waa sawirka shirkadda oo si muuqata u qeexi doona astaantaada. Astaanta loo isticmaalo calaamad sawireed gaar ah waa inay ahaataa mid fudud oo si fudud loo aqoonsan karo. Taas waxa aad isticmaali kartaa walxo joomatari oo kicisa qaybo ka mid ah kamarada sida muraayada, ujeedo, furitaanka diaphragm, iwm. Xusuusnow in mid kasta oo ka mid ah walxaha aad ku darto astaantaada ay qeexi doonaan nooca ganacsiga aad tahay iyo sida aad isu iibiso.
Aad bay muhiim u tahay in farta aad isticmaalayso ay u ahaato mid la akhriyi karo oo nadiif ah intii suurtogal ah, maadaama ay tahay waxa ugu horreeya ee la akhrin doono oo aanay macno samaynayn in farta la akhriyo ay hoosayso. Waxaan kugula talineynaa inaad isticmaashid wejiyada nooca sans serif ama leh tifaftiran, serif aan muuqaal lahayn. Ma aha in serifs-ku yihiin kuwa ugu yar ee la tilmaamay, laakiin sababtoo ah muuqaalkooda, waxay badanaa leeyihiin sifooyin aad u caadi ah waxayna da 'weyn karaan oo si buuxda u beddeli karaan dabeecadda astaantaada. U fiirso cunsurkan maadaama uu yahay kan ugu muhiimsan oo ay la socdaan walxaha garaafka ee aad ku darto.
Saamaynta iyo gradients
Ma aha in ay yihiin cadawga ugu weyn ee naqshadeynta astaanta, laakiin maaha kuwa ugu habboon tan iyo markii ay wasakhayn karaan sawirka astaantaada. Waa inaan taas xasuusannaa astaantu maaha in ay noqoto mid ifaysa intii suurtogal ah ee waa ka ugu shaqayn badan. Ku darista iftiinka aadka loo wanaajiyay ama saamaynta gradient-keeda waxay kaliya ka dhigi doontaa magaca astaanta iyo qiyamka maqan waxayna jahawareerin doontaa dhagaystayaashayada. Astaantu waa inay ka kooban tahay oo keliya walxaha aan u aragno inay lagama maarmaan tahay, taas oo ah, sawir cad oo fudud.
Faahfaahin kale oo lagu xisaabtamayo waa midabada midabka, waa wax caadi ah in la sameeyo tijaabooyinka midabka oo ugu dambeyntii la joog laba ama saddex qaybood. Iska ilaali inaad xisaabta ku darto midabada sida jaalaha ah ama midabada dhalaalaya muuqaal ahaan, maadaama aysan ahayn kuwa ugu badan ee lagu taliyay maadaama ay lumiyaan aragga fogaanta. Maskaxda ku hay midabyo diiran iyo qabow, samee isbarbardhigga labadan nooc ee kala duwan maadaama ay inta badan yihiin kuwa ugu badan ee lagu arko noocyada. Dhanka kale, haddii aad doorbidayso calaamad si sahlan loo aqoonsan karo, isticmaal kaliya madow iyo caddaan ama tones monochrome fudud.
Kuwani waxay ahaayeen qaar ka mid ah fikradaha ugu wanaagsan ee loogu talagalay naqshadeynta summada ama calaamad gaar ah qaybta sawir-qaadista. Waxaa jira xulashooyin badan oo jira marka aan naqshadeyno, laakiin waxaa jira kuwo aad u yar oo aad u shaqeynaya ama sax ah marka la naqshadeynayo.
Waxa kale oo aad samayn kartaa baadhitaano kala duwan oo ku saabsan noocyada sawir qaadista ee aadka loo aqoonsan karo ama waxaad ka raadin kartaa sawir qaadayaasha oo aad ku dhiirigeliso calaamadahooda ama calaamadahooda. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale samayn karnaa isbarbardhigga calaamadeena oo sidaas awgeed waxaan u ilaalin karnaa isku midka ama farqiga u dhexeeya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » fikradaha logo sawir
Sida loo qaabeeyo Word